Dalxiise Mareykan ah oo lagu xiray Ukraine si uu u xirto funaanadda Ruushka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Ukraine War Deg Deg Ah » Dalxiise Mareykan ah oo lagu xiray Ukraine si uu u xirto funaanadda Ruushka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Ukraine War Deg Deg Ah • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Fiidiyowga fiidiyowga dhacdada Ukraine, oo lagu daabacay internetka, tuhmanaha, oo xiran funaanad ay ku xardhan tahay ereyga “Ruushka” iyo calanka waddanka, ayaa la maqli karaa isagoo si jees-jees ah ugu jeesjeesaya booliiska si ay “u ooyaan,” si joogto ahna uga xanaajisa askarta ku adkeysanaysa in “aad tahay Naasi,” iyo “maxaad samayn doontaa - i xira?”
Soo -booqde Mareykan ah ayaa lagu xiray Odessa anshax xumo awgeed.
Mareykan ayaa beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay kadib markii lagu xiray Ukraine.
Dalxiiska Mareykanka ayaa khalkhal galiya nidaamka dadweynaha, wuxuu kiciyaa isku dhaca Odessa ee Ukraine.
Nin, la rumeysan yahay inuu yahay dalxiis Mareykan ah, ayay boolisku xireen magaalada Odessa ee koonfurta Ukraine, kadib markii lagu eedeeyay inuu khalkhal galiyay intii lagu guda jiray dabaaldegga maxalliga ah ee sannad -guuradii ka soo wareegtay markii ay Ukraine xornimada ka qaadatay USSR.
Odessa Xarunta booliiska ee gobolka ayaa xaqiijisay in muwaadin ajnabi ah oo 26 jir ah loo xiray “khalkhal galinta nidaamka dadweynaha”.
Bayaan ay soo saartay waaxda bilayska ee maxalliga ah ayaa lagu yiri, "intii la saarayay calanka Ukraine ee Jaranjarada Potemkin, ninku wuxuu u dhaqmay si qallafsan wuxuuna kiciyay isku dhac dadka ka qeyb qaadanaya dhacdada."
“Isaga oo aan ka jawaabin dalabka saraakiisha fulinta sharciga si loo joojiyo falalkiisa sharci darrada ah, ninku wuxuu isku dayay inuu baxsado isla markii la geeyay saldhigga booliiska,” ayay sii socotay.
Fiidiyowga fiidiyowga ee Ukraine Dhacdada, lagu daabacay internetka, tuhmanaha, oo xiran funaanad ay ku xardhan tahay ereyga “Ruushka” iyo calanka waddanka, ayaa la maqli karaa isagoo si jees jees ah ugu jees-jeesaya booliiska si uu “u ooyo,” isagoo si joogto ah uga xanaajinaya askarta oo ku adkeysanaya “waxaad tahay Nazi, ”iyo“ maxaad samayn doontaa - i xira? ” In kasta oo aan tafaasiil rasmi ah laga siinin booliiska, haddana wuxuu u muuqdaa inuu la hadlayo lahjadda Ameerika waxayna warbaahinta maxalliga ahi tabisay inuu yahay muwaadin Mareykan ah.
Muuqaal kale oo laga soo duubay goobta, wuxuu si geesinimo leh u beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay, isagoo ku adkeystay inuu "hadda socda oo ay booliisku xireen. Xorriyadani miyey ka jirtaa Ukraine? ”
Wararka qaar ayaa sheegaya in ninkan uu ku dhashay dalka Ruushka sannadkii 1994 -kii, wuxuuna u soo guuray Mareykanka markii qoyskiisu halkaas u soo guureen.
Ninkan oo aan magaciisa la shaacin, ayaa hadda su’aalo la weydiinayaa waxaana lagu wadaa in lagu soo oogo dacwad -kufsi yar iyo inuu si ulakac ah u diiday amar sharci ah ama codsi ka yimid sarkaal boolis ah.